Irrigation Association (IA) inozivisa kuti Chikunguru 2021 yakadomwa zvakare seMwedzi weIrirrigation Mwedzi. Iyi danho remwedzi wese mukana weindasitiri yemadiridziro kusimudzira kukosha uye kukosha kwemaitiro ekudiridzira edigital. Indasitiri yemadiridziro - zvese nzvimbo neyekurima - yanga iine matambudziko ayo mugore rapfuura. Kubudikidza nesimba uye kugadzikana, iyo indasitiri yakakwanisa kuwana mhinduro kumamiriro ekunze uye kukurira zvipingaidzo izvi ndokubuda sevakasimba kupfuura nakare kose.
IA iri kuenderera mberi nedingindira iri muna 2021 nekupemberera mhinduro dzinounzwa nenyanzvi dzekudiridzira nzanga kuburikidza nemaitiro akanakisa uye nehunyanzvi hwekushandisa. Dingindira ra2021 reMwedzi weKudiridza weSmart ndere: Kudiridza kwakanaka. Sustainable solutions. Mumwedzi wese waChikunguru, IA nenhengo dzayo vachasimudzira mashandisiro emashandisirwo emadiridziro edhijitari uye matekinoroji ari kupa mhinduro kumatambudziko ezuva ranhasi neramangwana mumaindasitiri ekudiridzira emuminda nekurima.
Smart Irrigation Mwedzi inotanga muna Chikunguru 6 neTekinoroji Chipiri. Nyanzvi dzemadiridziro dzinokurudzirwa kupfeka bhuruu musi waChikunguru 6 kusimudzira ruzivo nezvese zvinogadzira madiridziro edhijitari, kusanganisira vanhu, maitiro uye matekinoroji anonyatsoisa mvura kuminda yedu yekurima, nharaunda uye turfgrass. Vatori vechikamu vanokurudzirwa kugovana mafoto avo vakapfeka bhuruu pasocial media vachishandisa hashtag #SmartIrrigationMonth.
"Nematambudziko akasangana neindasitiri yedu mugore rapfuura nedenda reCOVID-19, tinodada nekukwanisa kupemberera indasitiri yedu kuburikidza neSmart Irrigation Mwedzi gore rino," akadaro IA CEO Deborah Hamlin, CAE, FASAE. “Mwedzi weSmart Irrigation ndiwo mukana wedu wekuburitsa kukosha nekukosha kwemadiridziro anoshanda. Kuisa pfungwa pazvinhu zvitsva zvekudiridzira nemaitiro izvo zviri kubatsira mukuwana rutsigiro mumaindasitiri ezvekurima nemamiriro epasi inzira huru yekuziva kukosha kuri kuita indasitiri yedu mukuva vatariri vane basa rezviwanikwa. ”
Smart Irrigation Mwedzi unoshanda semwedzi wekuratidzira kune indasitiri yemadiridziro neruzhinji kuti vaone nekusimudzira mabhenefiti ane chekuita nedigital uye inoshanda kudiridza.
"Indasitiri yemadiridziro iri kuenderera mberi iri pamberi pekusimudzira matekinoroji nemaitiro ekushandisa nemvura nemazvo," akaenderera mberi Hamlin. "Tinotarisira kuona maitiro nemhinduro zvinoita kuti izvi zvikwanisike mukati memwedzi weSmart Irrigation 2021."
Uyu Chikunguru, nyanzvi dzekudiridzira dzinokokwa kuti dzigovane nevatengi vadzo nenharaunda kuti vanoita sei mhinduro dzakaperera vachishandisa matekinoroji uye madiridziro edigital. IA inopa zviwanikwa zvakawanda uye matipi ekubatanidzira midhiya neruzhinji uye zvekushandisa pasocial media. Enda ku www.machumXNUMXsc.org kune izvi zviwanikwa uye rumwe ruzivo.
Neraki, mabhenefiti e smart kudiridza akatipoterera. Ivo vari muchikafu chatinodya, mweya watinofema, nzizi dzatinokoshesa uye kutinhira kwevanhu vazhinji pasi pezviedza zveChishanu manheru pachikoro chako chesekondari. Kunyangwe isu kazhinji tisingakwanise kuona kudiridza kwedhijitari muchiito, tinovimba kuti iri kuita basa rayo, pasina kutambisa imwe yenyika zviwanikwa zvakakosha: mvura. Nehurombo, havazi vese vanonzwisisa mabasa aya ekudiridza anotamba muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tinofanira kuita basa riri nani rekutaura nyaya yedu uye kuratidza kudiridza kwakanaka mukuita.
Saka, chii chaizvo chinonzi kudiridza kwakanaka mukuita? Zvinogona kuva chero chinhu kubva pakati pivots pamusoro peminda muNebraska kudonhedza kudiridza mumunda wemizambiringa kune-gore-based kudzora masisitimu ayo anotendera madiridziro maneja kudzora nzira yekudiridza kubva chero kupi pasirese nefoni yavo kana piritsi. Kudiridza kwakangwara mukuita kunogona zvakare kuve vanhu vanoona kuti mitsetse yedrip iri iri kufamba mushe kana vanosasa vari kugovera mvura zvakaenzana kutenderera denderedzwa rezvirimwa. Dhijitari kudiridza mukuita isu tese tiri kushanda pamwechete kuti tive nechokwadi chekuti tine chikafu chatinoda uye nharaunda dzatinonakidzwa nadzo.
Smart Irrigation Mwedzi Kuuya muna Chikunguru
Tags: yepakati pivot kudiridzaKudonha Kudiridzasmart kudiridza
Mushure mezvirimwa kutenderera- "mbatata inonetsa"
Haasi madiki mbatatisi: Hatfield purazi inogadzira matani mazhinji e tubers